Webiga Yangtze: sifooyinka, isticmaalka, flora iyo fauna | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 18/05/2022 10:00 | Ciencia
El webiga yangtze Shiinaha waa webi cajiib ah oo dhererkiisu dhan yahay 6.300 kiiloomitir iyo bedka biya-baxa ee 1.800.000 oo kiiloomitir laba jibaaran. Tani waxay ka dhigaysaa webiga saddexaad ee ugu weyn adduunka, marka laga reebo Amazon iyo Nile, iyo webiga ugu dheer dalkiisa iyo qaaraddiisa.
Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuu sheegno sida wabiga Yangtze uu u wanagsan yahay, astaamihiisa iyo waxyaabo kaloo badan.
2 Wax soo saarka iyo isticmaalka webiga Yangtze
3 flora webiga yangtze
5 Qaybaha wabiga Yangtze
Socodkeeda xooggan ayaa muhiim u ah ciidda Shiinaha maadaama ay ka dhigan tahay 40% biyaha dalka laga heli karo. Intaa waxaa dheer, marka la eego heerka dhaqaalaha, wabigu waa arrin muhiim u ah wax soo saarka beeraha. Dhinaca kale, biyaheedu waxa ay u adeegaan xarunta ugu wayn ee korontada laga dhaliyo ee Shiinaha iyo biyo xidheenka ugu wayn aduunka ee biyo xidheenka Three Gorges.
Celceliska socodka wabiga Yangtze waa 31.900 m³/s, kaas oo ka tirsan nooca monsoon, waxaa saameeya roobka bilaha Maajo ilaa Ogosto, qulqulka marka hore wuu kordhaa ka dibna hoos ayuu u dhacayaa Sebtembar ilaa Abriil. Jiilaalku waa xilli ciyaareedkiisa ugu hooseeya.
Waxay leedahay in ka badan 6.000 kiiloomitir oo dheeri ah iyo in ka badan 1.800.000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran oo barkado ah. Wadar ahaan, waxay cuntaa shan meelood meel dhulka Shiinaha. Isla markaana. Saddex meelood meel ka mid ah wadarta dadweynaha waxay ku nool yihiin gudaha barkadeeda. Saamaynta ay ku leedahay dhaqaalaha waa 20% GDP.
Dhererkiisa awgeed, waxa uu haystaa magaca webiga saddexaad ee ugu dheer adduunka, iyo sidoo kale webiga ugu dheer ee mara isla waddankaas. Galbeed ilaa bari, waxa ay dhex martaa 8 gobol, 2 degmo oo si toos ah u hoos taga Dawladda Dhexe, iyo Ismaamulka Tibet, iyada oo dabaylaha iyo dabaylaha u socda dhinaca badda.
Dhexdeeda iyo qaybteeda hoose waa dhul qoyan iyo harooyin kala duwan. kuwaas oo isku xidhan oo samaysanaya nooc ka mid ah mareegaha caarada oo u ogolaanaya qaybinta xayawaanka. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku lumisay wax ka beddelka habka uu ka helay bini'aadamka.
Webiga Yangtze wuxuu dhererkiisu ka badan yahay 6.000 kiiloomitir wuxuuna marag u yahay dhaqan iyo deegaan qani ah oo kala duwan. Laga soo bilaabo Naxi iyo Tibetanka ku nool buuraha ka fog adduunka intiisa kale, iyada oo loo marayo macbudyada Buddhist iyo nasashada, meelaha warshadaha mashquulka ah.
Wax soo saarka iyo isticmaalka webiga Yangtze
Gobol kasta oo ay maamusho waxay ku leedahay magac ka duwan. Markii hore, waxa loo yaqaan Dangqu, webiga swamps, ama Drichu. Barta dhexe waxa loo yaqaan wabiga Jinsha. Webiga hoose waxaa lagu magacaabaa Chuantian River ama Tongtian River.
Cawaaqibta kale ee ka dhalan karta tiradan ballaaran ee magaalooyinku waa kala duwanaanshaha cimilada. Wabiga Yangtze wuxuu dhex maraa qaar ka mid ah "magaalooyinka foornada" ee caanka ah ee Shiinaha, aad buuna u kululaadaa xagaaga. Isla mar ahaantaana, waxaad la kulmaysaa gobollo kale oo diiran sanadka oo dhan iyo gobollada ay la kulmaan jiilaal aad u qabow.
Dooxada Rio Azul waa mid bacrin ah. Wabiga Yangtze wuxuu door muhiim ah ka ciyaara waraabinta dalagyada badarka, oo leh meesha ugu badan ee bariiska, taas oo ka dhigan 70 boqolkiiba wax soo saarka, sarreen iyo shaciir, badarka, sida digirta iyo galleyda, iyo suufka.
Wabiga waxaa u hanjabaya wasakhowga, kalluumeysiga xad-dhaafka ah, biyo-xireennada iyo xaalufinta dhirta. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo qaylo-dhaantan, oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee dadka iyo saamaynta ay ku leedahay duur-joogta, wabigu weli waa mid ka mid ah noocyada biyaha ee ugu kala duwan.
flora webiga yangtze
Meelo kala duwan oo ku teedsan webiga Yangtze, dhirta ayaa laga saaray, gaar ahaan isticmaalka bini'aadamka. Tani waxay ka dhigan tahay khatar aad u daran sida Dhirtu waxay luminaysaa awoodda ay u leeyihiin in ay biyaha nuugaan, taas oo keeni karta in ay deegaanka waayaan.
Iyadoo ay jirto arrinkan ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in la ogaado noocyada dhirta waddaniga ah iyo tan bani'aadamku soo bandhigay, weli waxaa laga heli karaa dhirta caadiga ah ee webiyada, gaar ahaan meelaha dadku ku yar yihiin sida kuwa korka iyo qaybo ka mid ah bartamaha.
Qeybta sare ee wabiga waxaa laga helaa buuraha leh jibbaarada sida safsaf iyo juniper, iyo sidoo kale geedo kale oo alpine ah. qaybta dhexe Waxa u taagan kaymo alwaax adag ah iyo kayn, meesha ugu dambaysana waa bannaan oo ay webiyadu inta badan qarka u saaran yihiin.
Waddada hoose, ee dadka badan ayaa inta badan loo isticmaalaa beerashada badarka, iyo ku dhawaad ​​dhammaan dhirta caadiga ah ee aagga waa la jaray, oo ka tagay kaliya dhowr duur ah. Dhinaca cirifka, sida ay u qulqulayso badda, waxaa lagu arki karaa dhirta biyaha sida mangroves.
Wabiga Yangtze waa mid ka mid ah biyaha noolaha ee ugu kala duwan adduunka. Daraasadii 2011, Waxaa jiray kaliya 416 nooc oo kalluun ah, kuwaas oo ku dhawaad ​​112 ka mid ah ay ku badan yihiin biyaheeda. Waxa kale oo jira ilaa 160 nooc oo amphibians ah, iyo sidoo kale xamaaratada, naasleyda, iyo shimbiraha biyaha oo ka cabba biyaheeda.
Kalluunka ugu badan ee ku nool Yangtze waa cyprinids, inkastoo noocyada kale ee nidaamka Bagres iyo Perciformes sidoo kale laga heli karo tiro yar. Waxaa ka mid ah, Tetradentate iyo Osmium waa kuwa ugu yar.
Sababaha ay ka mid yihiin kalluumeysiga xad-dhaafka ah, wasakhowga iyo tirada dhismooyinka farageliya socodka webiga ayaa soo afjaray ama khatar geliyay tiro badan oo noocyo kala duwan ah, kuwaas oo kaliya 4 ka mid ah 178 ay degi karaan dhammaan koorsada webiga.
Qaar ka mid ah noocyada kaliya ee laga heli karo aaggan waa Yangtze iyo sturgeon Shiinaha, porpoise aan fiicneyn, sturgeon cad, alligator, waqooyiga madow, iyo salamander weyn Shiinaha.
Markii hore, Yangtze waxay hoy u ahayd laba ka mid ah noocyada ugu caansan ee masiibada deegaanka: qoolleyda jilicsan ee weyn iyo Dolphin Yangtze, oo sidoo kale loo yaqaanno qoolleyda jilicsan ee cad. Labaduba waxaa lagu dhawaaqay inay dabar go'een ka dib markii ay si aad ah halis u galeen.
Qaybaha wabiga Yangtze
Si loo joogteeyo qulqulka xooggan, Wabiga Yangtze wuxuu hela tiro badan oo biyo-mareenno ah oo ka yimaada isha uu ka soo jeedo ilaa meesha uu u socdo, marka lagu daro biyaha uu helo xilli-roobaadka. Wadarta, Waxaa jira in ka badan 700 kanaal oo yaryar oo quudiya Yangtze. Waxa ugu muhiimsan kuwan waa dhalashada Han, taas oo ku jirta marxaladda dhexe.
Wabiyada ugu waaweyn ee ku yaal meelaha sare ee wabiga Yangtze waa nidaamka biyaha Jinsha-Tongtian-Tuotuo, Wabiga Yalong iyo webiga Minjiang, iyo meelaha sare ee wabiga Wujiang.
Iyo qaybteeda dhexe, waxay ka helaysaa biyaha Dongting Lake, kuwaas oo Dhanka kale waxaa bixiya Yuan, Xiang iyo webiyada kale. Intaa waxa dheer, garabkeeda bidix waxa uu helayaa webiga Han oo galooban.Dhinaca hoose waa webiga Huaihe qayb ahaan. Wabiga Yangtze ayaa ku soo laaban jiray harada Poyang wakhtigan, laakiin hadda wuu engegay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto webiga Yangtze iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Wabiga Yangtze
Waxaan maalin walba la socdaa xogahaaga qiimaha badan oo qiiro iga buuxinaya anigoo badinaya dhaqankayga guud